Musqusha Vacuum iyo Soo-saaraha Musqusha La Qaadan Karo - ZNZK
Sichuan Zhongneng Teknolojiyada Ilaalinta Deegaanka Co., Ltd. waa shirkad tiknoolajiyad sare leh oo diiradda saareysa cilmi baarista sayniska, qaabeynta, wax soo saarka, rakibaadda iyo adeegyada farsamada ee "musqulaha faaruqinta". Iyada oo tikniyoolajiyad qaan ah iyo naqshad hodan ah iyo khibrad dhisme, ZNZK had iyo jeer waxay safka hore uga jirtaa cilmi-baarista alaabada nidaamka musqusha ee Shiinaha.
ZNZK wuxuu u gudbiyay alaab-qeybiyeha ugu weyn ee musqusha faaruqinta ah ee Shiinaha. Iyadoo 500 + rakibaadda qaran ahaan, injineerada naqshadeynta ZNZK iyo maareeyayaasha mashruuca ay ku lug yeesheen mashaariic badan oo kala duwan of
Gaarsiinta Ruushka iyo Wadamada CIS
Musqusha Vacuum - Porcela
Musqusha Vacuum - Stainle
Musqusha Fadhiga Vacuum - P
Musqusha squat Vacuum - S
2021 Labada Kursi ee ugu Fiican Mobile Va
Moobilada Saddexda Kursi ee Biyaha Wax Ku Oolka ah
Global Afar Kursi Biyaha-keydinta
Raaxo Shan Kursi Mobile Re
★ Muuqaalka iyo midabka
★ U habeyn karaa 2 ilaa 6 kursi musqusha faakuumka ah
★ Naqshadaynta booska
★ Qalabka birta ah ee dhoobada ama birta ah
★ Baaquli musqusha ama digsiga squat
Musqushayada moobiilku waxay siisaa dabacsanaan weyn xagga mashaariicda maadaama ay aad u dhaqdhaqaaq badan tahay.
Marka uusan jirin biyo-soo-gal iyo tuubo bullaacad ah, 2000 ilaa 3000 oo biyo lagu shubo ayaa suurtagal ah. Macaamiilku wuxuu kaloo dooran karaa qalabka kululaynta iyo dahaadhka, iyo heerkulka adeegsiga deegaanku waa -50 ° ilaa 40 °.
Waxay soosaari doontaa xal qanciya dalabaadkaaga!
Nala soo xiriir, waxaan nahay online!
Musqusha faaruqinta ah ee ZNZK ayaa si weyn wax u qabata
Keydso 12089tan biyo ah sanadkiiba.
Waqti isticmaal awood kaliya 0.0025W.
Ku habboonaanta deegaanka -40℃～ ++50℃.
Xalka musqusha faaruqinta ah ee Mobile ZNZK
Muuqaalka nidaamka musqusha faaruqinta, ZNZK waxay soo saartay suuliga musqusha ee mobilada, taas oo si sahlan loo rakibi karo isla markaana dhaqaale ahaan (si ballaaran loogu adeegsado tareenada xawaaraha sare leh, diyaaradaha, maraakiibta, goobaha saliida, saldhigyada korontada, degmooyinka, goobaha muuqaalka leh, sare- meelaha qabow, meelaha biyo la’aanta iyo wasakhda aan lahayn, iwm)
Meelaha ganacsiga ee alaabada
Musqulaha dadweynaha ee goobaha muuqaalka leh
Suuliga faaruqa ah ee isbitaalka
Musqusha dadweynaha ee aagga saliida
Musqulaha dadweynaha ee saldhigga korontada
Musqulaha dadweynaha ee Tareenka